Nin Soomaali Ah Oo Laga Soo Tixraacay Taleefoon Loo Adeegsaday Weerar Argagixiso Oo Si Nabad Ah Ugu Laabtay Dalka Canada – somalilandtoday.com
Nin Soomaali Ah Oo Laga Soo Tixraacay Taleefoon Loo Adeegsaday Weerar Argagixiso Oo Si Nabad Ah Ugu Laabtay Dalka Canada
(SLT-Ottawa)-Cabdixakiim Guuleed waa Soomaali haysta dhalashada waddanka Canada,wuxuu si nabad ah ugu guryo noqday magaalada Etobicoke Canada sida ay tabisay warbaahinta dowladda ee dalkaas kadib markii ay maxkamad ku taala Kenya ku weyday danbi la xariira in uu ku lug lahaa falkii lagu weereray 15 bishii janaayo hoteelkii DusitD2,kaas oo lagu dillay 21 ruux 18 saacadood oo ay dhismahaasi ku jireen kooxo hubaysan,weerarkaasi oo ay sheegteen kooxda Al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya.
Waa kuma Abdilhakim
Guuleed wuxuu tagay waddankaasi Canada oo u dhalasho ka helay sannadkii 1992, shaqadiisu waxay ahayd darawal kaxeeya baabuurta xamuulka qaada,wuxuu sida caadiga ah u imaan jiray Kenya sidii uu qoys-kiisa oo deganaa Kenya gaar ahaan xaafadda Islii ugu dhamayn lahaa ogolaashaha in ay Canada ula guuraan isaga.
Muddo dheer kadib, riyadaas waa ay u rumoowday, balse laba cisho ka hor markii uu reerkiisa ula safri lahaa Canada, waxaa gurigiisa yimid boolis kadibna waxaa loo taxabay xabsiga.
”Waxay guriga la soo galeen qoryo,waxayna ugu hor jeebeeyeen xaaskayga iyo carruurtayda, indhaha ayay iga xidheen” ayuu yiri Cabdxakiim oo la hadlay warbaahinta Canada.
Cabdixakiim wuxuu dib ka ogaaday danbiga loo heystay ,danbigaas oo aanu waligii ku fakarin in uu samayn karo, kadibna uu xabsi ku mudan karo.
Maalintii uu weererku dhacay
Guuleed wuxuu ku sugnaa safaaradda Canada ee Kenya si uu buuxiyo warqada codsiga dhalashada canugiisa u yaraa carruurta uu dacwoonayay, wuxuu damcay in uu waco xaaskiisa,nasiib daro moobilkiisii gacantu wuu u shaqeyn waayay,qof ku dhawaa oo aanu aqoon ayuu ka codsaday inuu moobilkiisa kala hadlo xaaskiisa.
Laamaha amaanka Kenya ayaa sheegay in qofka moobilka iska lahaa uu ka mid ahaa raggii weererka geystay,arintan ayaa horseeday in Guuleed uu ka soo muuqdo maxkamad kadib mudo gaaraysa 21 casho oo ku jiray xabsi ku yaala Kenya.
Garyaqaanka Cabdikariim Chacha Mwita ayaa u sheegay warbaahinta qaranka Canada ee CBC in sababta loo tuhmay ay ahayd maadaamaa uu Soomaali ahaa oo kaliya.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay kaga hadashay dhaqanka ciidanka argagixiso la dirirta laga soo bilaabo sannadkii 2014-kii, waxayna sheegtay hay’adda in ciidamada ay dadka la tuhmo kula dhaqmaan si ka baxsan xuquuqdan aadanaha.